सफल बिक्री सक्षमताको लागि टेक्नोलोजी | Martech Zone
सोमबार, अप्रिल 15, 2013 बुधवार, मई 21, 2014 जेन लिसाक गोल्डिंग
आजको विश्वमा, प्रविधि र बिक्री सक्षमता एकसाथ जानुहोस्। यो अत्यावश्यक छ कि तपाईं आफ्नो सम्भावित गतिविधिहरू ट्र्याक गर्दै हुनुहुन्छ ताकि तिनीहरूलाई तातो वा नरम सीसाको रूपमा योग्य बनाउन। सम्भावितहरू तपाइँको ब्रान्डसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्दैछन्? के तिनीहरू तपाईंको ब्रान्डसँग अन्तरक्रिया गर्दैछन्? तपाईं यसलाई ट्र्याक गर्न के उपकरणहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ?
हामीले हाम्रो साथ काम गरेका छौं बिक्री प्रस्ताव प्रायोजक, टिन्डरबक्स, कम्पनीहरूले योग्यता र ट्र्याक गर्नका लागि प्रयोग गर्ने विभिन्न उपकरणहरू र प्रक्रियाहरूको बारेमा एक इन्फोग्राफिक सिर्जना गर्न। जे होस् बिक्रीको फनेल परिवर्तन हुँदैछ, विक्री चक्रको क्रममा अझै केहि फरक चरणहरू छन्: मार्केटिंग र सेल्स, प्रोस्पेक्टि,, क्वालिफाइंग, कन्फर्मिंग, वार्तालाप, र लेनदेन। प्रक्रिया रैखिक नहुन सक्छ, तर यी चरणहरू बिक्री बन्द गर्न महत्वपूर्ण छन्।
यी मध्ये कुन उपकरणहरू तपाईं आफ्नो बिक्री चक्र छोटो बनाउन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? तपाइँ कसरी बिक्री सक्षमको सम्बन्ध मा तपाइँको टीमको लागि अवसरहरू सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ? सहि उपकरणहरूको प्रयोगले तपाईंलाई "बिक्री सुन" मा मद्दत गर्दछ।
अप्रिल 17, 2013 मा 6: 54 एएम
"तपाईंले आफ्नो बिक्री चक्र छोटो बनाउन यी मध्ये कुन उपकरणहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? बिक्री सक्षमताको सन्दर्भमा तपाइँ तपाइँको टोलीको लागि कसरी अवसरहरू सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ? सही उपकरणहरू प्रयोग गर्नाले तपाईंलाई "बिक्री सुन" प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
म तपाईसँग थप सहमत हुन सकिन। सही उपकरणहरू प्रयोग गरेर - र मैले तिनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न भनेको छु - तपाईंको धेरै समय बचत गर्न र तपाईंको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ। यद्यपि, यससँग समस्या यो हो कि धेरै व्यक्तिहरूले यी उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्दैनन् वा तिनीहरू प्रभावहीन रूपमा प्रयोग गर्दैछन्।
अप्रिल 17, 2013 मा 3: 08 PM
तपाईंको टिप्पणीको लागि धन्यवाद, एनी! म पनि तपाई संग सहमत छु। मलाई लाग्छ कि उपकरणहरू प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नु आजकल एक समस्या हो - मानिसहरू विचलित हुन्छन् वा सिक्न समय लिदैनन्। त्यसकारण, तपाईंले धेरै फरक अवसरहरू गुमाउन सक्नुहुन्छ।
अप्रिल 18, 2013 मा 2: 09 एएम
ya jenn उपकरणहरूको प्रभावकारी तरिकाले प्रयोग गर्नु अब ठुलो सौदा हो, राम्रो विवरण ट्यांक
अप्रिल 18, 2013 मा 3: 09 एएम
मलाई कसरी मन पर्छ DK New Media टिन्डरबक्सको साझेदार हो र इन्फोग्राफिकले टिन्डरबक्सलाई यहाँका अन्य कुनै पनि उपकरणभन्दा ३००% बढी सुझाव दिन्छ। म आश्चर्यचकित छु कि यहाँ कति अन्य उपकरणहरू सम्बद्ध छन् DK New Media र Tinderbox। के यो हाम्रो निपटानमा मार्केटिङ/बिक्री सफ्टवेयरको समग्र दृष्टिकोणको लागि आशा गर्नु धेरै हो?
सेप्टेम्बर 22, 2014 मा 11: 16 AM
मलाई इन्फोग्राफिक मन पर्छ, जेन। धेरै राम्रो गरियो - कम्तिमा कसैको दृष्टिकोणबाट जो माग श्रृंखलाको दुबै साइलोमा रहेको छ। म माथिका टिप्पणीहरूसँग पनि सहमत छु- मानिसहरू यी उपकरणहरूको लागि अपनाउने चरणबाट बाहिर गइरहेका छन्।
सेप्टेम्बर 22, 2014 मा 11: 22 AM
धन्यवाद, ब्रायन! म तपाईको विचारको कदर गर्छु। मलाई लाग्छ त्यहाँ त्यहाँ धेरै उपकरणहरू छन् कि तपाइँ के खोज्दै हुनुहुन्छ वा तिनीहरू वास्तवमा केको लागि प्रयोग गरिनु पर्छ भनेर जान्न गाह्रो छ। त्यो ब्रान्डिङ दृष्टिकोणबाट सोच्नको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हुनेछ, जहाँ कम्पनीहरूले प्रभावकारी रूपमा व्याख्या गर्न सक्षम हुन आवश्यक छ कि तिनीहरूले के प्रयोग गर्न सकिन्छ। र, त्यो सिक्काको अर्को छेउमा, प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले के चाहन्छन् भनेर पनि जान्न आवश्यक छ ताकि तिनीहरूले आफ्नो लक्ष्यलाई पहिलो स्थानमा समर्थन नगर्ने कुरामा लगानी गर्दैनन्।